आज बिहीबार, कुन राशिको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज बिहीबार, कुन राशिको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल...
मिति २०७६ साल असार २६ गते बिहीबार। इस २०१९ जुलाई ११, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु, नेसं ११३९ दिल्लाथ्व, आषाढ शुक्लपक्ष, दशमी, २७ः३० उप्रान्त एकादशी तिथि । काठमाडौंमा सूर्योदय– ५ः१७ बजे, सूर्यास्त– १९ः०१ बजे र दिनमान ३४ घडी ० पला।
मेषः– अपरान्ह पूर्व कामले गति लिने देखिन्न। काम गर्दा हेलचक्र्याई नगर्नु होला। खर्च विवाद आदिबाट जोगिनु होला। अपरान्हबाट समयमा क्रमिक सुधार आउनेछ। साँझपख केहि काम हुनेछन्। कार्य लगनशिलता बढ्नेछ। अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ। ऋण लगानीमा जोड नदिनु होला। अरुको बोलीमा मात्रै विश्वास नगर्नु होला।
वृषः– दिनको अधिकाँश समय अनुकुल देखिन्छ। समयको ख्याल राखेर काम गर्नु होला नत्र आएको अवसर गुम्न सक्छ। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । अपरान्हबाट समयले कम साथ दिनेछ। काममा रोकावट आउने संकेत देखिने छन्। साँझपख खर्चमा वृद्धि हुनेछ । सोझै अरुको विश्वास गरेर काम नगर्नु होला हानी हुनेछ।
कर्कटः– रिस,डाहा गर्ने आफै किनारा लाग्ने छन् । गतिरोध हट्नेछ । पूर्वान्हमा गरेका काम भन्दा अपरान्हबाट शुरु गरेका काम बढि सफल हुनेछन्। काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन्। ऋण लगानी गर्दा विशेष ध्यान दिनु होला। पठन पाठनमा सामन्य प्रगति हुनेछ। मानसिक तनावमा थोरै कमी आउनेछ।
सिंहः– कुलत र गलत संस्कार भएका व्यक्तिको फन्दामा पर्न सकिन्छ सतर्क रहनु होला। नोक्सानका काम बढि हुनेछन्। चिन्ताले छोड्ने छैन । आफन्त प्रतिको आस्था र विश्वास घट्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट लगानी गरे अनुसारको उपलब्धि हात लाग्ने छैन। अपरान्हबाट समयमा सामान्य सुधार आउनेछ। तनावमा थोरै कमि आउनेछ।
कन्याः–पूर्वाद्ध थोरै अनुकुल देखिन्छ गरेका केहि काम सफल हुनेछन् । उत्तराद्र्ध प्रतिकुल बन्नेछ । काममा विलम्ब गर्नु भयो भने उपलब्धिका अवसर गुम्नेछन् । विश्वास र भरोसा टुट्नेछ। अन्तिम चरणमा पुगेका काम विग्रिन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउन सक्छ। स्वस्थ्यमा समस्या आउनेछ। चिन्ता बढ्नेछ।
तुलाः– दिन सामान्यतया अनुकुल नै देखिन्छ । विवादको अन्त्य हुनेछ । परिश्रमको प्रतिफल राम्रो निस्कने छ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन। स्वव्यवसायमा उन्नति प्रगतिका सम्भावना बढि देखिन्छ। आफन्तको सहयोग मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ,आम्दानी बढ्नेछ। पढाईमा प्रगति हुनेछ।
वृश्चिकः– काम गर्दा दुविधामा नपर्नु होला। दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु होला गरेका कामबाट लाभ लिन सकिनेछ। पढाई लेखाईमा सामान्य सुधार आउनेछ । हृदयबाट सहयोग गर्ने कम हुनेछन्। विरोधीको संख्या बढ्नेछ। साना,साना काम सम्पन्न गर्न पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ।
धनुः– समयले खासै साथ दिने देखिन्न। जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला। आर्थिक संरचनालाई नचलाउनु होला क्षय हुनसक्छ। महत्वकाँक्षी योजना अगाडि नबढाउनु होला। शरीरिक शिथिलता बढ्नेछ। अरुको काम गरेर जश पाईने छैन। लगानी अनुसारको व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन सकिने छैन। भ्रममा परिनेछ।
मकरः– अपरान्ह पूर्व गरेका धेरै जसो काम सफल हुनेछन् । त्यसैले समयको महत्व वुझेर समयमा काम सम्पन्न गर्नु होला । अपरान्हबाट समयले कम साथ दिनेछ । काम गर्ने उत्साहामा कमी आउनेछ । काम अनुसारको दाम हात पार्न कठिनाई हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ। खर्च विवाद बढ्न सक्छ। चिन्ता बढ्नेछ।
कुम्भः– दिनको अधिकाँश समय मध्यम देखिन्छ। उपलब्धिका काम कम हुनेछन्। ऋण लगानी गर्दा एकपटक सोचेर गर्नु होला। अपरान्हबाट समय थोरै अनुकुल हुनेछ। पढाईमा ध्यान जानेछ। लगनशिलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सामान्य सुधार आउनेछ । अरुको भर नपर्नु होला,आफन्तबाट अल्प सहयोग मिल्नेछ।
मिनः– समयमा गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन्,ढिला सुस्ति गरेमा उपलब्धि शून्य त हुने छैन तर कम हात लाग्नेछ। ढिला गर्दा कार्य सम्पन्न गर्न धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ। सहयोगी घट्ने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा सोचे जस्तो सफलता मिल्ने छैन। आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति कम होला। अरुको कुरामा विश्वास गर्दा घाटा हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट कम आम्दानी हुने छ।